9 Koorsooyinka GIS ee ku jihaysan maaraynta khayraadka dabiiciga
Bixinta tababarka tooska ah iyo fool-ka-foolka ah ee codsiyada Geo-Engineering ayaa maanta aad u badan. Soo jeedinno badan oo jira, maanta waxaan dooneynaa inaan soo bandhigno ugu yaraan sagaal koorso oo heer sare ah oo leh habka maaraynta kheyraadka dabiiciga ah, seddex ka mid ah shirkadaha leh tababaro tababar oo xiiso leh. Machadka Deegaanka ...
MappingGIS, marka laga reebo inaad na siiso baloog xiiso leh, waxay ku nuuxnuuxsataa moodeelkeeda ganacsi dalab tababar ah oo khadka tooska ah ah oo ku saabsan arrimaha macnaha guud ee geospatial. Sannadkii 2013 oo keliya, in ka badan 225 arday ayaa qaatay koorsooyinkooda, tiro ii muuqata aniga oo tixgelin mudan, iyada oo la tixgelinayo in dadaalka uu ku jiro laba ganacsade oo tan bilaabay wax yar ka hor ...
Esri wuxuu ArcGIS u siiyaa ardayda daabacaad gaar ah oo ka kooban wararkii ugu dambeeyay iyo horumarka tikniyoolajiyadda falanqaynta juqraafi ee ardayda jaamacadda. Isticmaalka tikniyoolajiyadda Esri ee jaamacadaha iyo baahiyaha gaarka ah iyo xaaladaha ardayda, ayaa ka dhigtay Esri ...